China Olee otú chepụta plastic akụkụ Manufacturer na Supplier | Meste
Iji chepụta akụkụ plastikbụ ịkọwapụta ọdịdị, nha na nkenke nke akụkụ ahụ, dabere na ọrụ nke akụkụ ahụ na-arụ na ngwaahịa ahụ, na iwu nke ịkpụzi usoro maka plastik. Mmepụta ikpeazụ bụ eserese maka imepụta ebu na akụkụ plastik.
Ngwaahịa na-amalite site na imewe. Nhazi nke akụkụ plastik na-ekpebi mmezu nke usoro dị n'ime, ọnụ ahịa na ọrụ nke ngwaahịa ahụ, ma na-ekpebi usoro ọzọ nke nrụpụta ebu, ụgwọ na okirikiri, yana ịkpụzi ọgwụ na usoro nhazi na ụgwọ.
A na-eji akụkụ plastik eme ihe n'ọtụtụ ngwaahịa, akụrụngwa na ndụ ndị mmadụ na ọha mmadụ nke oge a. Akụkụ plastik chọrọ ụdị na ọrụ dị iche iche. Ha na-eji ihe plastik eme ihe ha nwere di iche. N'otu oge ahụ, e nwere ọtụtụ ụzọ isi mee akụkụ plastik na ụlọ ọrụ. Yabụ ịmepụta akụkụ plastik abụghị ọrụ dị mfe.
A na-emepụta nhazi akụkụ dị iche iche na ihe dị iche iche nhazi. Nhazi maka ịkpụzi plastik tumadi gụnyere n'okpuru:
2. ịkpụzi ịkpụzi
E nwere ọtụtụ ụzọ iji mepụta ha. Ọgwụ na ịkpụzi bụ ewu ewu n'ichepụta usoro, n'ihi na ọgwụ kpụrụ 50% ~ 60% plastic akụkụ na-emepụta byb ọgwụ ịkpụzi, ọ bụ a elu-ọsọ mmepụta ikike.
Gosi ikpe maka ụfọdụ akụkụ plastik anyị mere:
Plastic Herọd nke ọhụụ ekwentị
Plastic akụkụ nke usoro
Plastic ikpe nke electronic
Plastic ụlọ maka ngwá
N'okpuru ebe anyị na-ekekọrịta otu esi emebe akụkụ plastik n'akụkụ atọ
* Atụmatụ 10 maka imewe akụkụ plastik ị ga-amarịrị
1.Chọpụta ọdịdị ọdịdị na nha nke ngwaahịa a.
Nke a bụ nzọụkwụ mbụ na usoro nhazi niile. Dabere na nyocha ahịa na ihe ndị ahịa chọrọ, chọpụta ọdịdị na ọrụ nke ngwaahịa, ma chepụta ọrụ mmepe ngwaahịa.
Dabere na ọrụ mmepe, ndị ọrụ mmepe na-arụ ọrụ nyocha teknụzụ na teknụzụ na ngwaahịa a, wee wuo ụdị ọdịdị 3D nke ngwaahịa a. Mgbe ahụ, dị ka nghọta ọrụ si arụ ọrụ na mgbakọ ngwaahịa, akụkụ ndị enwere ike na-ezube.
2.Separate onye akụkụ si ngwaahịa Eserese, họrọ plastic resin ụdị maka plastic akụkụ
Nzọụkwụ a bụ ikewapụ akụkụ sitere na ụdị 3D enwetara na usoro gara aga wee hazie ha n'otu n'otu. Dị ka ọrụ chọrọ nke akụkụ ahụ, họrọ ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ihe akụrụngwa. Dịka ọmụmaatụ, a na-ejikarị ABS eme ihe na
shei, ABS / BC ma ọ bụ PC ka achọrọ ka ịnwe ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ, akụkụ akụkụ dịka oriọna, oriọna PMMA ma ọ bụ PC, gia ma ọ bụ iyi POM ma ọ bụ Nylon.
Mgbe ịhọrọ ihe nke akụkụ ahụ, nhazi zuru ezu nwere ike ịmalite.
3.Define gbara akụkụ
Akụkụ nkuku na-enye ohere maka iwepu plastik site na ebu. Na-enweghị akụkụ nkuku, akụkụ ahụ ga-enye nnukwu nguzogide n'ihi esemokwu n'oge iwepụ. Akụkụ nkuku kwesịrị ịdị na ime na mpụga akụkụ ahụ. Ihe omimi di omimi karie, nke ka nnukwu uzo. Rulekpụrụ isi mkpịsị aka dị mfe bụ ịnwe ogo ogo 1 maka inch ọ bụla. Enweghi uzo ozo zuru oke nwere ike ibute ihe mkpochapu n'akụkụ akuku na / ma obu nnukwu uzo pin pinki (karia na nke a).
Akụkụ nkuku nke mpụga elu: Akụkụ miri emi karị, nke ka nnukwu akụkụ. Rulekpụrụ isi mkpịsị aka dị mfe bụ ịnwe ogo ogo 1 maka inch ọ bụla. Enweghi uzo ozo zuru oke nwere ike ibute ihe mkpochapu n'akụkụ akuku na / ma obu nnukwu uzo pin pinki (karia na nke a).
Ọtụtụ mgbe, iji nwee ihu ọma dị mma, a na-eme udiri ya n'akụkụ akụkụ. Mgbidi nwere udidi siri ike, esemokwu buru ibu, ọ dịghịkwa mfe iwepu ya site na oghere ahụ, yabụ na ọ chọrọ ka eserese buru ibu. Ihe na-adịwanye njọ bụ, nnukwu akụkụ achọrọ.
4.Define mgbidi ọkpụrụkpụ / edo ọkpụrụkpụ
Solid udi ịkpụzi achọghị n'ime injection ịkpụzi ruru ka ndị na-esonụ:
1) .Cooling oge bụ proportional ka square nke mgbidi ọkpụrụkpụ. Ogologo oge jụrụ oyi maka ihe siri ike ga-emeri akụ na ụba nke imepụta oke. (ogbenye eduzi nke okpomọkụ)
2) .Thicker ngalaba na-agbada karịa akụkụ ahụ dị ntakịrị, si otú a na-ewebata nsụgharị dị iche iche nke na-akpata warpage ma ọ bụ akara sink wdg. (Njirimara njirimara nke plastik na njirimara pvT)
Ya mere, anyị nwere isi iwu maka plastic akụkụ imewe; ruo ókè o kwere mee ọkpụrụkpụ mgbidi kwesịrị ịdị n'otu ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe site na akụkụ ahụ. A na-akpọ ọkpụrụkpụ mgbidi a n'ọnụ.
Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla siri ike dị na akụkụ ahụ, ekwesịrị ịme ya oghere site na iwebata isi. Nke a kwesiri ime ka odi ka odi n’iru ya.
3) .Gịnị bụ ihe a ga-atụle maka ikpebi mgbidi ọkpụrụkpụ?
Ọ ga-adị oke ma sie ike zuru ezu maka ọrụ ahụ. Mgbidi mgbidi nwere ike ịbụ 0,5 ruo 5mm.
Ọ ga-adịkwa gịrịgịrị iji zaa ngwa ngwa, na-ebute oke akụkụ dị elu yana arụpụta dị elu.
A ghaghị idozi ọdịiche ọ bụla na ọkpụrụkpụ nke mgbidi dịka opekempe dị ka o kwere mee.
A plastic akụkụ na mgbanwe mgbidi ọkpụrụkpụ ga-enwe dị iche iche jụrụ udu na dị iche iche shrinkage. N'ọnọdụ dị otú a, ịnweta nnagide na-esiri anyị ike ma ọtụtụ oge agaghị ekwe omume. Ebe mgbanwe ọkpụrụkpụ nke mgbidi dị mkpa, mgbanwe dị n'etiti abụọ kwesịrị iji nwayọ nwayọ.
5.Nhazi njikọ n'etiti akụkụ
Ọ na-adịkarị anyị mkpa ijikọ shells abụọ ọnụ. Mepụta ụlọ emechiri emechi n'etiti ha iji tinye ihe ndị dị n'ime (nzukọ PCB ma ọ bụ usoro).
Usualdị njikọ dị iche iche:
1). Snap nko:
A na-ejikarị njikọ nko nko na obere ngwaahịa. Ihe e ji mara ya bụ na a na-etinye nko snap n'akụkụ akụkụ nke akụkụ ahụ, a ga-emekwa ka ngwaahịa ahụ pere mpe. Mgbe a gbakọtara, a na-emechi ya ozugbo na-enweghị iji ngwaọrụ ọ bụla dịka screwdriver, ultrasonic welding die na ndị ọzọ. Na mwepu bụ na snapk nko nwere ike ime ka ebu ihe mgbagwoju anya. Usoro ihe mmịfe ahụ na usoro eji ebuli elu dị mkpa iji ghọta njikọta ọnya njikọta ma mekwuo ọnụ ahịa ebu.
2). Ịghasa nkwonkwo:
Rewghasa nkwonkwo siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya. Karịsịa, ihe nkedo + nut fix bụ nnọọ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma dịgide, na-enye ohere ọtụtụ disassemblies enweghị cracks. Theghasa njikọ kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa na nnukwu kpochidoro ike na dismantling ọtụtụ. Ihe ọghọm bụ na kọlụm ịghasa na-ewe ohere karịa.
3). Na-arị elu bosses:
Arịọnụ bosses njikọ bụ idozi akụkụ abụọ site uko nchikota n'etiti bosses na oghere. Wayzọ njikọ a esighi ike iji hapụ ngwaahịa agbasasị. Ihe ọghọm bụ na ike mkpọchi ga-ebelata ka oge disassembly na-abawanye.
4). Ultrasonic ịgbado ọkụ:
Ultrasonic ịgbado ọkụ bụ site n'itinye akụkụ abụọ n'ime ultrasonic ebu na fusing kọntaktị elu n'okpuru ihe nke ultrasonic ịgbado ọkụ igwe. Nha ngwaahịa ahụ nwere ike pere mpe, ntanye ahụ dịtụ mfe, njikọ ahụ siri ike. Mwepu bụ ojiji nke ultrasonic ebu na ultrasonic ịgbado ọkụ igwe, ngwaahịa size nwere ike ịbụ kwa nnukwu. Mgbe imebisị, akụkụ ultrasonic enweghị ike iji ọzọ.
Ercwepu ihe bụ ihe na-egbochi iwepụ ma ọ bụ ọkara nke ebu ahụ. Ercgba okpu nwere ike ịpụta ihe ọ bụla na imewe. Ndị a bụ ndị a na-adịghị anakwere, ma ọ bụrụ na ọ bụghị njọ karịa enweghi ndebe akụkụ n'akụkụ. Agbanyeghị, ụfọdụ mkpuchi dị mkpa na / ma ọ bụ enweghị ike izere. N'oge ndị ahụ, ọ dị mkpa
a na-emepụta okpuru site na ịmịgharị / na-akpụ akpụ n'akụkụ na ebu.
Buru n'uche na imepụta mkpirisi bụ ihe dị oke ọnụ mgbe ị na-emepụta ebu ahụ ma kwesiri ịbe opekempe.
7. nkwado Ribs / Gussets
Ribs na akụkụ plastik na-eme ka nkwesi ike (mmekọrịta dị n'etiti ibu na ntụgharị akụkụ) nke akụkụ ahụ ma nwekwuo ike. Ọ na - emekwa ka ikike dị elu ka ọ na - eme ka agbazere gbazee na ọgịrịga ya.
A na-etinye Ribs n'akụkụ nduzi nke nrụgide kachasị na ntụgharị na ihu na-enweghị ọdịdị nke akụkụ ahụ. Ebu zuru, mbelata na ịpụpụtakwa kwesịrị imetụta mkpebi ntinye ọgịrịga.
Ribs nke na-esonye na mgbidi kwụ ọtọ ekwesịghị ịkwụsị na mberede. Ngbanwe nke nta nke nta na mgbidi ọnụ kwesịrị belata ihe ize ndụ maka ịta ahụhụ.
Rib - akụkụ
Ribs kwesịrị inwe akụkụ ndị na-eso.
Ọkpụkpụ Rib kwesịrị ịdị n'etiti 0,5 ruo 0,6 ugboro ugboro mgbidi ọkpụrụkpụ iji zere akara mmiri.
Rib dị elu kwesịrị ịbụ 2.5 ruo ugboro atọ ọkpụrụkpụ mgbidi.
Rib ga-enwe 0,5 na ogo ogo 1.5 iji kwado mbupu.
Rib Rib kwesịrị inwe radius 0.25 na 0.4 ugboro ugboro mgbidi oke.
Ebe dị anya n'etiti ọgịrịga abụọ kwesịrị ịbụ ugboro abụọ ruo ugboro atọ (ma ọ bụ karịa).
8. Ederede Okirikiri
Mgbe elu abụọ zutere, ọ na-etolite nkuku. Na nkuku, mgbidi mgbidi na-abawanye ruo oge 1.4 nke oke mgbidi. Nke a na - ebute nsonazụ dị iche na nke akpụzi na nrụgide na ogologo oge jụrụ oyi. Ya mere, ihe egwu nke ịda mbà na ọrụ na-abawanye na nkuku dị nkọ.
Iji dozie nsogbu a, a ga-eji akụkụ okuku mee ka akụkụ ndị ahụ dị larịị. Ekwesịrị inye radius na mpụga yana n'ime. Enwela nkuku dị nkọ n'ime ya ka ọ na-akwalite mgbape. Radius kwesịrị ịbụ nke na ha na-akwado iwu mbadamba mgbidi mgbe niile. Ọ ka mma ịnwe radius nke 0.6 ruo 0.75 ugboro mgbidi mgbidi na nkuku. Enwela nkuku dị nkọ n'ime ya ka ọ na-akwalite mgbape.
9.Screw onyeisi imewe
Anyị na-eji kposara edozi ihe abụọ na ọkara, ma ọ bụ tinye PCBA ma ọ bụ ihe ndị ọzọ n'elu akụkụ plastik. Ya mere ịghasa bosses bụ ihe owuwu maka ịghasa n'ime na ofu akụkụ.
Scghasa onyeisi bụ cylindrical ke udi. Enwere ike jikọta onye isi na isi ya na akụkụ nne ma ọ bụ enwere ike jikọta ya n'akụkụ. Ijikọ n'akụkụ nwere ike ibute akụkụ buru ibu nke plastik, nke na-adịghị achọ ka ọ bụrụ na ọ nwere ike ibute akara mmiri ma nwekwuo oge jụrụ. Enwere ike idozi nsogbu a site na ijikọ onye isi site na ọgịrịga n'akụkụ mgbidi dị ka eserese. Enwere ike ịme ka ahịhịa nwee isi site n'inye ọgịrịga buttress.
A na-eji ịghasa na onyeisi ahụ agbanye ụfọdụ akụkụ ndị ọzọ. E nwere eri akpụ ụdị kposara na azọ ịcha ụdị ụdị kposara. A na-eji kposara na-eme ihe na thermoplastics ma na-eji kposara eriri eri na akụkụ plastik thermoset.
Eriri na-akpụ kposara na-emepụta nwanyị eri na n'ime mgbidi nke onye isi site na mmiri oyi - plastik adịghị arụ ọrụ na mpaghara kama ịkpụ.
Rewghasa onyeisi ga kwesịrị ekwesị akụkụ iji nagide ịghasa ntinye agha na ibu-etinye na ịghasa na ọrụ.
Nha nke mụụrụ ikwu na ịghasa dị oké egwu maka iguzogide eri agbapu na ịghasa sere si.
Oghere dị elu ga-ebu ibu iji guzogide nrụgide hoop n'ihi eri na-akpụ.
Bore nwere ubé ibu dayameta na ntinye ezumike maka obere ogologo. Nke a na - enyere aka ịchọta ihe ị ga - eme tupu ị banye. Ọ na - ebelata nrụgide na njedebe nke onye isi.
Ndị na-emepụta Polymer na-enye ntuziaka maka ịchọpụta akụkụ nke onye isi maka ngwa ha. Rewghasa emepụta na-enye ụkpụrụ nduzi maka nri mụụrụ size maka ịghasa.
E kwesịrị ilebara anya iji hụ na nkwonkwo mgbatị siri ike gburugburu gburugburu ịghasa na isi.
Ekwesịrị ịkpachara anya iji zere nrụgide a kpụrụ akpụ na onye isi n'ihi na ọ nwere ike ịda n'okpuru ọnọdụ ike.
Orenọ nkịtị gwụrụ na onyeisi kwesịrị ịdị omimi karịa eri omimi.
10. Mma ihu
Mgbe ụfọdụ, iji nweta ọdịdị dị mma, anyị na-emekarị ọgwụgwọ pụrụ iche n’elu akpa plastik ahụ.
Dị ka: udidi, elu kenkowaputa, ịgba sere, laser osise, na-ekpo ọkụ zọ, electroplating na na. Ọ dị mkpa iburu n'uche na atụmatụ nke ngwaahịa ahụ tupu oge eruo, iji zere nhazi na-esote enweghị ike nweta ma ọ bụ nha mgbanwe na-emetụta nzukọ ngwaahịa.
Nke gara aga: Akpụzi Ndinam
Osote: Die casting ebu